Unokwanisa kundiratidza ini 10 top backlink nzvimbo kuti ndibhadharwe dzinosungirika zvakachengeteka here?
Hungu, ndinogona kukuratidza nzvimbo dzepamusoro 10 dzemashure rekutengesa hutano hwakanaka nemikana shomanana yekusimudza mureza mutsvuku neGoogle. Muzvokwadi, kushandiswa kwehupenyu hwekuzvarwa kwekugadzira humwe hunokosha kudarika. Ndiri kureva nyanzvi webmaster uye SEOs vezvechikoro vakangobva kusimbisa zvakare kuti mazita ewebsite yega yega inowanzoendeswa ne-site yekugadzirisa chete ne10%. Panguva imwecheteyo, humwe hufambiro hwekutsvaga muInternet hunotarisana nehukuru hwehupano hwehuwandu hwewebsite, pamusoro peverlinks zvose maererano nehutano, uye huwandu hwavo. Ingozvichengetedza mupfungwa-kuisa zvinyoronyoro, ruzivo rwese runowanikwa kune webhusaiti yako kana bhulogi riri kupa chimwe chinhu chakanaka che "voti" inofungidzirwa neGoogle pachayo, pamwe chete nemamwe magetsi makuru ekutsvaga pazvinouya pakuratidza nzvimbo yakakodzera yepamusoro urongwa hweSERPs.
Cherechedza, zvisinei, kuti backlinks inomiririra seyo inopfuura inobatsira uye inobatsira nzira yekuvandudza nzvimbo yako yehutachigaro huripo munguva shoma. Asi zvisati zvaitika kukuratidzai nzvimbo dzepamusoro 10 dzemashure endlinkine dzinokosha nguva yako nesimba, ngatishandisei - ngatitengere zvikwangwani zvakanaka uye nokuda kwechinangwa chakanaka zvingave zvakanaka. Kunyangwe, zvose zvingaita zvinogonawo kuratidza kuva zvinokuvadza, panzvimbo yekubatsirwa. Ndicho chikonzero ndinotaura kuti ndinovashandisa nekunyatsotarisirwa uye kuongorora kaviri kwekubatanidza kwega yewebsite yako kana bhulogi isati yaenda. Uye hapana chikonzero chokutaura kuti kubhadharwa kunobatanidza kana huzhinji kana kubva kune mairi mavhiri (i. e. , paIndaneti mapepa uye nzvimbo dzekushandurana kwechibvumirano panguva yakawanda, pamwe chete nedzimwe shanduro dzinoshandiswa dzinobatsira dzinowanzoshandiswa pakutsvaga matani emasikirwo asina kunaka, kunze kwekuita nenzira inofambisa). Saka, yeuka iwe unofanirwa kutenga nguva yakakwana yekushanda tsvakurudzo yakakodzera usati wawana imwe kubhadharwa mazano - kunyange kubva kune dzimwe nzvimbo gumi dzakakwirira kumashure. Mushure mezvose, kumhanyira kunotengesa kune dzimwe nzvimbo paInternet ingangodaro inotyisa uye inotyisa kuita chero nguva.
Nzvimbo dzepamusoro gumi dzeRedlink dzinobhadhara kubhadhara
Links Management - ndiyo nzvimbo yokutanga ndinokukurudzira kuti ushanyire. Nokuti ndakashandisa mabasa avo ekuvakisa backlinks kune webhusaiti yangu yepaiche uye ndakawana zvinenge zvese zviri nyore, zvinovimbika, uye zvakachengeteka. Links Management haibatsiri bhizinesi, saka unogona kugara uchitenga zvakanaka PageRank backlinks pamutengo wakakodzera. Kunze kwezvo, mutengo wepasi apa unotanga nehora imwe chete.
Post Links - chinyorwa chechipiri chinowanika munhamba yangu yepamusoro 10 nzvimbo dzekudzokera shure kwekugadzira purogiramu yakachengeteka. Pakati pemakona akasimba epaduratifomu iyi, unogona kubatana nyore nyore kubhadhara imwe nguva $ 49 yemari. Post Links yakaratidza kuva nzira yakavimbika yekukurumidza kuyanana nevaridzi vakakodzera. Uye kune zvakawanda zvevashambadziri imomo vanotarisa maitiro akanaka nekutenga zvakanakisisa backlinks. Cherechedza, kuti kana webhusaiti yako kana bhulogi yakakosha, iwe unogonawo kuzviita semuparidzi. Kana uchinge uine hutsva, hunhu, uye zvakanyatsogadzirirwa, zvose zvaunoda ndezvokutumira nzvimbo yako. Nenzira iyo, uri kuve nekubatanidzwa mukuvakwa kwechokwadi kumashure kwevatengi chaivo kuita mari. Mushure mezvose, zvose ndezvebhizimisi, handizvo here?
Backlinks dot COM - ndiyo nzvimbo yechitatu inonyanya kuzivikanwa yekutenga backlinks ne. Icho chinonyanya kukosha chekushandisa iyi ndechekuti inokwanisa kukupa iwe yakawandisa rwandu rwezvinyorwa zvinowanika mune zvose zvakasimba PR nzvimbo nepamusoro-soro rehurumende, uye huwandu hwakawanda kune dzimwe nzvimbo dzepakati pechitatu kana mablogi anofanirwa kubhadhara HQ backlinks se zvakanaka. Chii chinopfuura - Backlinks dot COM ndiyo nzvimbo yakakura uye inoshandiswa-inoshandiswa kubata zvimwe zvimwe zvinokosha zvekubatanidza uye kukwidziridza nzvimbo dzako dzemazuva ano zvakare. Kunze kwekuti, kuzivikanwa pakati pevanozivikanwa zvikuru vanobhadhara mazano webhanditi zvichida chero webhusaiti yepaji, unogona kufara pamwe nenzira inoshandiswa yekutsvaga pakati pemashure gumi gumi ekudzokera shure - unonzwa wakasununguka kuita bhizimusi rakabudirira nekadhi rechikwereti, kana kungoshandisa yako PayPal account yako pachako.
Black Hat Links - ndiyo ye-Black-Hat SEO chishandiso chinogona kukupa chero chakanaka chipi zvacho chaunoda-neP PR, Web 2. 0 inowanika, yakasimba simba remakore, uye simba, pamwe chete nezviratidzo zvakasiyana-siyana zvevanhu, nezvimwewo. Sezvaunogona kunge uchifungidzira, Black Hat Links ndiye mutengi anotengesa kutengesa backlinks mumaphaketani makuru akawanda kune daredevils yakaoma, pane kupa imwe chete kana kuti dzimwe mbiri dzakabhadharwa kune vamwe webmasters vakangwarira uye vashandi vebhizimusi vepaIndaneti. Pakati pezvimwe zviitiko zvakasiyana-siyana, chigadzirwa ichi chinogona kukupa chero chinenge zana zana kumashure kana maviri - kuunza zviitiko zvakaenzana zvinonzwisisika pamusana pekuita kuti zvose zvionekwe mukati meawa imwe chete kana zvakadaro. Pasi payo - edza chinhu ichi chete kana iwe unyanzvi mune SEO uye uchinzwa ushingi zvakakwana kuti utore njodzi chaiyo pamusoro pekushandisa Black-Hat SEO uye imwe isingaiti zvizere "zvemutemo" tricks uye zvirongwa zvekuita.
The Hoth - chimwe chimwe chinhu chakanaka chokuvaka backlinks pachake. Zvechokwadi, The Hoth haisati iri pakupedzisira yakanakisisa sarudzo inowanika mune zvakakodzero dzemashure gumi gumi kumashure. Asi zvakakosha zvikuru kune hutano hwehutano hwekutengesa, pamwe nekutanga musoro neGoogle's indexing. Edza iyi software uye uite kuti webhusaiti yako iite zvishoma. Cherechedza, zvisinei, kuti usati waenda mberi, iva nechokwadi chokuti une zvinhu zvose zviripo. Ndinokurudzira zvakasimba kuti uzvichengetedze kure pane chero zviito zvekutenga zvakanyanya, zvingava nekokuongorora kaviri pahutano hwose usati hwaenda huripo. Chinhu chacho ndechokuti zvakadai sezvipingamupinyi zvinowanzobatanidza kuumba software, zvishandiso zvebhuku rino zvinogona kuratidza kuti zvakafanana zvakakuvadza nokuda kwewebsite yako kana blog. Kuti udzivise izvi zvisina kunaka mugumisiro, ndinokurudzira kuita senyatso sezvaunokwanisa, kunyanya pakutanga. Kamwe zvakare - kumhanyira kunokonzera sevakawanda vanoita sevakanaka PR backlinks sezvinobvira ndeyechokwadi kusaita chinhu. Asi chii chinofanira kuitwa zvakanakisisa? Chinhu chacho ndechekuti zvose zvaunoda apa ndeyekuti urege kuita zvakashinga, kunze kwekuti iwe uchida kutarisa kushungurudza kubva pakuona kwemajeri makuru ekutsvaga. Hapana anoda kupiwa mhosva neGoogle, chaiko? Saka, ramba uchishanda nesimba nguva dzose kuti uite zvishoma nezvishoma - iwe pawakacherechedza kuti chikamu chemashoko ako makuru ekutora kufambira mberi kwakanakisisa kunofamba pamusoro peSERPs, iwe unokwanisa kukurumidza uye wotanga kutenga zvigaro zvakawanda uye zvishoma - zvishoma nezvishoma kuenda chinangwa chako chekupedzisira uye nekuramba uchicherechedza mamiriro ako ezvinhu zvino ne backlink nyanzvi yekuongorora.
Fiverr - chimwe chiziviso chinozivikanwa chinopa mazano ekuvakisa mazano muhurukuro yakakwana yehurongwa. Ramba uchifunga mupfungwa, kuti sezvimwe chero chinhu chipi zvacho chinobatanidza, Fiverr inogona kuva nzvimbo ine ngozi - saka tarisa! Usangoti uwedzere nehuwandu paunowedzera hutsva huripo huripo, uye ita chekuongorora kaviri kuti utarise nevane ruzivo chete uye vanhu vanovimba zvikuru kunze uko. Upenyu-ndiyo ndiyo nzvimbo yakachengeteka yakawanikwa pakati pezita remashure ekudzokera kumashure.
. Asi kuchengetedzeka nguva dzose kuchaita kuti uwane mari yakawedzerwa, iko? Ndiri kureva kuti Up Work iri kunyanya kushanda nemudzidzi ane ruzivo rwekuzvipira. Hongu, mutengo wavo wekutengesa dzimwe nguva ungave wakaipa kwazvo, asi basa racho richiri pakati peavo vanonyanya kugadzirisa kuita chibvumirano chabhadhara backlinks. Kuita kudaro, iwe uchagara uchinyatsoziva zvauri kuripa.
Vanhu Perhora - ndiyo yechipiri zita rakanaka munyika yekuzvipira. Pakati pezvikamu zvaro zvepamusoro, mharaunda iyi ye freelancing inogona kupa PR PR backlinks naD Teerera kune munhu wese anoda kuvabhadhara. Tichifunga nezvezviitiko zvinotarisirwa kubva kune iyo yose yepamusoro 10 mashure endaneti (i. e. , kunyatsotsvaga munzvimbo dzekutsvaga nzvimbo yewebsite kana blog), Vanhu Per Hour vari kuita basa pakupedzisira kupfuura chero ani zvake paWebhu. Sei? Kungofanana nehutano huno hutsika hune unyanzvi hwakakwana hwokupa backlinks yakasimba zvikuru nguva dzose, ndinofanira kubvuma. Kune zviuru zvevanhu vese vese vakachenjera vese vanofambisa kunze uko kuti vakupei mukupedzisira wepamusoro PR re backlinks neKutevera Teerera kubva kune zvakawanda zvakasiyana-siyana neine simba guru uye PageRank, saHuffPost, IBM, The Next Web, uye mamwe mazita akawanda yemafuta makuru enyika anozivikanwa nevakawanda vedu.
Buy High-Quality Backlinks dot COM - inozivikanwa pakuva nzvimbo yakanakisisa yekuona webhusaiti yako kana kukwira mabhuroji pamusoro peSERPs yeGoogle. - se rocket. Nhengo yavo yepamusoro-sachigaro ye SEOs uye webmasters vari kutamba makore anopfuura gumi mumumabhizimusi vanogona kupa chinoshamisa chakanaka kukusimudzira ne Do Do backlinks inotengeswa zvizhinji.
Backlinks Rocket - haisi yepamusoro pezvenzvimbo dzepamusoro gumi chete asi SEO muwani wepasi rose. Mukupa iwe unhu hwakasiyana-siyana hwebhadharo mapeji kubva pa $ 59 kusvika anenge zana amadhora, Backlinks Rocket inogona kukubatsira ne rarest deals - kupa dot EDU backlinks kutengeswa. Vamwe vanhu vanotenda kuva nesangano rimwe chete rekudzidzisa kunobatsira zvikuru kupinda 100 zvakajairika.
Link Wheel Pro - ndiyo imwe nzira yakasarudzwa, iyo isingagoni kukodzera pane zvandinonyora pane gumi 10. Zvechokwadi, nzvimbo iyo inogona kunge inotyisa sezvinoratidzira kuwana yakawanda yemari ye backlinks inonyanya kushandiswa pakubatana kwekubatanidza uye zvimwe zvisingatevedzeri zvakakwana zvakavimbika. Chero zvazviri, kupa hutano hunokosha uye huri hurumende kumashure, Link Wheel Pro inotaridzika zvikuru chaizvo inonakidza kumitambo, handizvo here? Pashure pezvose, mutambo mukuru unoreva nguva dzose kutora ngozi huru. Kunyange zvakadaro, zvichiri kungosvika kwauri kuti usarudze Source .